Uncategorised | By Arraale Jama
Dalalka Suudaan iyo Jabuuti oo Codsaday in Somaliland Baadhis ku Samayso Markabka Hubka Sida ee Lagu Qabtay Berbera
Wasiirka Khaarajiga Somaliland oo ka hadlay jawaabaha ay ka bixiyeen codsiyada Suudaan iyo Jabuuti iyo Wasiir Warancadde oo faahfaahin ka bixiyey noocyada hubka la qabtay oo markabka laga dejiyey
Berbera (Jam)- Dawladda Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa caddaysay in dalalka Suudaan iyo Jabuuti ka codsadeen inay baadhitaan ku samayso markabka hubka siday ee lagu qabtay dekedda Berbera 24 January 2015, hubkaas oo hadda si rasmi ah looga dejiyey markabka.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Md. Maxamed Biixi Yoonis oo ka soo laabtay safar uu ku joogay dalalka Yurub, madaarka Hargeysa-na ugu warramay saxaafadda shalay, ayaa xusay in caalamku si weyn ugu hambalyeeyey tallaabada Somaliland ku qabtay markabka hubka siday, isagoo xaqiijiyey in waddamada Suudaan iyo Jabuuti ka codsadeen in baadhitaan sugan lagu sameeyo markabkaas oo dawladda Somaliland kala degtay hubkii saarnaa.
“Waxa aan la kulmay dawladda Sudaan oo ila soo xidhiidhay. Waxa kaloo aan la kulmay dawladda Jabuuti oo ila soo xidhiidhay, waxayna yidhaahdeen; ‘waxa aannu u baahanahay in aannu arrinka eegno oo aannu baadhitaan samaynno.’ Waad la socotaan Somaliland, guud ahaanba Soomaaliya iyo Eratariya waxa saaran cuna-qabatayn dhinaca hubka ah, beesha caalamkuna aad iyo aad ayey u soo dhowaysay hawshaas culus ee aynnu qabannay ee markabka hubka sida, hay’adaha caalamiga iyo Qarammada Midoobay-na waannu u sheegnay, welina waxa aannu ku jirnaa, dhinacyadaasna waxaannu u sheegnay in marka baadhitaanku noo dhammaado, isla markaana aannu xaqiijinno waxa hawshu tahay in aannu war ku celin doonno,” ayuu yidhi Wasiir Biixi.
Dhinaca kale, Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland Md. Cali Maxamed Warancadde oo isna warbaahinta kula hadlay magaalada Berbera shalay, ayaa caddeeyey in markabka la qabtay laga dejiyey hubka uu siday oo uu sheegay in aanay ilaa hadda ogayn cidda leh iyo halka lagu waday toona.
“Waxa aan jecelahay in aan caddaynon markabka MV. SHAKIR ee hubka siday in aannu ka dejinnay hubkii xalay (habeenkii Isniinta), waxaannu hubkaasi ahaa mid aannu garan weynay cid leh iyo meel uu u socdo midna. Inkastoo aynu nahay dal aan caalamku ictiraafsanayn, haddana waxaynu nahay dal isagu is-ictiraafay, kana mid ah caalamka, meel muhiim ahna kaga yaal qaaradda Afrika iyo mandaqadda Geeska Afrika, maadaama cuna-qabatayn dhinaca hubka ah saaran tahay meelo ka mid ah dalalka Geeska Afrika arrintaas awgeed, hubkaas waannu qabanay, waanan dejinnay, waxaannu ku jiraa gacan aamin ah,” ayuu yidhi Md. Warancadde.
Waxa kaloo wasiirku faahfaahin ka bixiyey noocyada hubka markabka laga dejiyey, waxaannu yidhi; “Hubka la qabtay waxa uu isagu jiraa toddoba nooc. Beebeeyo ayaa ku jira, madaafiic waaweyn ayaa ku jira, baabuurta gaashaaman ee ciidammada qaada ayaa ku jira, kuwo kale oo gaashaaman iyo hub fudud oo saarnaa ayaa ka mid ah, doonni weyn oo ku dagaalka ah, aadna u qiimo badan ayaa ku jirta.”
Sidoo kale, Wasiirka Daakhiligu waxa uu ka jawaabay eedaymo ka soo yeedhay maamul-goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo hore ugu eedeeyey Somaliland inay leedahay hubka markabka Dekedda Berbera lagu qabtay, isla markaana gacan-saar ka dhexeeyo dagaalyahannada Al-shabaab ee ka dagaallama dalka Soomaaliya.
“Ninkaa (Wasiirka Amniga Puntland) hadlay wuxuu runtii waxyeello weyn ku yahay wadahadalkii iyo wanaaggii naga dhexeeyay Puntland, waxaannu u egyahay nin aan xataa u war hayn siyaasadda dawladdiisa ama maamulkiisa, waxaannu ummadda Somaliland u muujiyey cadaawad aad u fool xun oo waxyeeli karta cilaaqaadka labada dal. Wuxuu ka been sheegay hubkan iyo waxa uu yahay. Markii aannu qabanay hubka markanbka saaran laba saac kadib waxaannu u sheegnay Qarammada Midoobay. Waxaannu u sheegnay Monitoring Group (Guddida Korkeerka Hubka ee UN-ka) in hubkaasi yahay hub aannu qabanay oo dekedda Berbera ku qabannay.”
Waxa uu intaa sii raaciyey, “Ninka isagu wax wata amma hub uu leeyahay la soo degaa iskuma qayliyo oo caalamka uma sheego, markaa arrintaas waxaannu u aragnay arrin cadaawad ah. Tusaale ahaan; bulshada gobollada bari ee Sool iyo Sanaag wuxuu ku sheegay argagixiso, taasoo meel-ka-dhac ku ah bulshada gobolkaas deggan iyo inuu waxyeelaynayo cilaaqaadka naga dhexeeya annaga iyo maamul-goboleedka Soomaaliya ee Puntland, waana arrin ay ka muuqato xumaan, xiqdi iyo xasad.”
Md. Cali Maxamed Warancade, ayaa ku sifeeyey Wasiirka Amniga Maamul-goboleedka Puntland nin aanwax aqoon ah u lahayn hawlaha amniga, xog badanna ka haysan markabka hubka siday ee dawladda Somaliland qabtay.